Galaxy S2.0 အတွက် One UI 10 သတင်းအပြည့်အစုံ | Androidsis
၎င်းတို့အားလုံးသည် One UI 2.0 Android 10 Galaxy S10 ၏ပထမဆုံး beta ကိုယူဆောင်လာသည်
Samsung သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမှ update ကိုကြေငြာခဲ့သည် Galaxy S2.0 အတွက် UI 10 Android 10 ကိုအသုံးပြုထားသည် ဒါဟာအံ့ဆဲဆဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှိပြီးသား ဖြစ်၍ အသုံးပြုသူများသည်သတင်းများအပြည့်အစုံကိုမျှဝေထားသည်။
Samsung ကတော်တော့်ကိုတော်တော့်ကိုတော်တော်တော်တော်ပါတယ် One UI 10 တွင် Android 1.0 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များအားလုံးကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ သို့သော်အသုံးပြုသူများအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြီးကျယ်လှသောအလွှာတစ်ခုကိုတည်ထောင်ရန်အချို့သောရှုထောင့်များတွင်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Galaxy S2.0 ရှိ One UI 10 Android ပြောင်းလဲမှုအပြည့်အစုံ
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ မျက်နှာပြင်အမူအယာအသစ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါand Android 10 ၏လက်များဖြင့်လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အမူအယာများပိုမိုအသုံးပြုရန်ရွေးစရာအခွင့်အလမ်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပိတ်ထားချိန်တွင်လက်ဗွေအိုင်ကွန်ကိုထည့်ရန်ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသူများစွာ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေသည်။ သတိရတယ်
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသွားရန်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းများအပြည့်အစုံကိုသွားလိမ့်မည်။ သို့သော် One UI 2.0 သို့ update လုပ်သောသုံးစွဲသူများသည် Calculator၊ Samsung Internet၊ Samsung Health နှင့် Samsung Notes များသို့ update များ Android 10. သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်မမေ့ပါနှင့် Android 10 ၏သတင်းများ.
တစ်ခုလက် mode ကို:
One Hand mode ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းသစ်များ: home ခလုတ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေအလယ်မှအောက်သို့ဆွဲချပါ။
Setting ကို Settings> Advanced Settings> One-leungeun mode သို့ပြောင်းထားပါတယ်။
SmartThings panel ကို Devices and Media ဖြင့်အစားထိုးသည်။
မီဒီယာ - သင့်မိုဘိုင်းနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်တေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ။
ကိရိယာများ။ သင်၏ SmartThings ပစ္စည်းများကိုအမြန် panel မှတိုက်ရိုက်စစ်ဆေး။ ထိန်းချုပ်ပါ။
Android 10 လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များအရလုံခြုံရေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ သင်၏ PIN၊ ပုံစံသို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုအရင်ထက်ပိုမိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ထည့်သည် လက်ဗွေ icon ကိုပြသရန်ရွေးချယ်စရာများ မျက်နှာပြင်ပိတ်သောအခါ။ သင်အမြဲပြသရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ဘယ်တော့မျှမပြရသို့မဟုတ် AOD ပြနေမှသာရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဘက်ထရီကန့်သတ်ချက်အတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့် Wireless PowerShare လုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ် Galaxy နှင့် Note ၏ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းအတွက်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ မဟုတ်ဘူး အဲဒါကိုသုံးဖို့ဗွီဒီယိုပျောက်သွားတယ်.
ကိုသုံးပါ အာရုံပြံ့လှငျ့ကိုရှောင်ရှားရန်အာရုံစိုက် mode ကို သင့်ဖုန်းမှ
install Galaxy စတိုးမှ add-ons များကို ပို။ ပင် features တွေလက်ခံရရှိရန်။
အဆက်အသွယ်များအတွက်အမှိုက်ပုံးထည့်ထားသည်။ သင်ဖျက်ပစ်လိုက်သည့်အဆက်အသွယ်များသည်၎င်းတို့အားထာဝရဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုမီအမှိုက်ပုံးထဲတွင် ၁၅ ရက်နေလိမ့်မည်။
အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်များအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများကိုယခုပြုလုပ်သည်။
တိုင် တည်နေရာသတိပေးချက်များ အချိန်တိကျတဲ့ကာလအဘို့။
အဲဒီလောက် .... ရှိပြီ Trash function ကိုဖန်တီးခဲ့တယ် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်မှားယွင်းစွာဖျက်မိလျှင်ဖိုင်များကိုပြန်ယူနိုင်သည်။
The မြန်နှုန်းနှင့်အချိန်ယူနစ် အဆိုပါယူနစ် converter ကို၌တည်၏။
Android Auto ယခုကြိုတင်ပြီးရောက်လာပါပြီ။
သင့်ရဲ့ Galaxy ထဲကနေအကျိုးအပြည့်အဝရဖို့အတွက် cheats တွေကိုထည့်ထားတယ်။
Android Beam ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ၎င်းတို့အားလုံးသည် One UI 2.0 Android 10 Galaxy S10 ၏ပထမဆုံး beta ကိုယူဆောင်လာသည်